I-Jungle Oasis - I-Airbnb
Ifakwe kwindawo ezolileyo, elawulwayo yokufikelela e-cul de sac le maisonette ekumgangatho ophezulu ineembono ezintle ukusuka kumgangatho omkhulu ongaphandle. Le yiyunithi ekumgangatho ophezulu ngaphezulu kwendlu enkulu, enezinyuko ezili-13 zokuhamba ukuya phezulu. Indawo yokungena yabucala enendawo yokupaka eyabiweyo, ikunika ubumfihlo kunye noxolo lwengqondo.
Igumbi lokuhlambela le-en-suite linokufikelela kwigumbi lokulala eliphangaleleyo nelitofotofo elinebhedi enkulukazi.
Kukho indawo yokuphumla evulekileyo evulekileyo / yokutyela / ikhitshi. Indawo yokuphumla inesofa yokulala yabantwana.
Le ndlu iphezulu ibekwe kwindawo ephezulu yemithi enembono entle ngaphezulu kwendawo yogcino lwendalo ezantsi ngaselwandle ukude. I-oasis enoxolo kunye nenzolo.
Ifakwe kwidolophu entle yaseWestville kwindawo ezolileyo, elawulwa yi-cul de sac. Imizuzu kude kumbindi weWestville kunye nomgaqo wemoto uM13. Ijonge kwiYunivesithi yakwazulu Natal, kwiKhampasi yaseWestville. I-Pavillion Shopping Centre ingaphantsi kwe-10 mins drive kunye neevenkile zalapha ekhaya, iindawo zokutyela kunye neendawo zokuzilolonga kwimizuzu emi-5 ukuya kwisikhululo seenqwelomoya samazwe ngamazwe saseThekwini 30 mins drive.
Iilwandle ezintle zaseThekwini ngokukhawuleza kwemizuzu eli-15 ukuhla endleleni! Ibucala ngokupheleleyo kunye neyakho indawo yokungena kunye neendawo zokupaka. Ukufikelela ngokulula ku-M13 kunye no-N3/N2.
Sihlala kwipropathi ngoko siyafumaneka ukuze sincede nangaliphi na ixesha. Qhagamshelana nge-app, okanye u-whatsapp ukuba uyathanda.